Sikhetha amakomiti amawadi, zimbandakanye nawe | News24
Sikhetha amakomiti amawadi, zimbandakanye nawe
UMTHETHO olawula ukusebenza komasipala uthi kumele emva kwezinsuku ezingaphansi kwamashumi ayisishiyagalolunye lokhetho lohulumeni basekhaya kumele kukhethwe labo abazoba amalungu ama wadi komiti. Labo bantu basebenzisana nekhansela njengosihlalo wewadi komiti.
Iwadi komiti inguhulumeni ohlezi eduze kakhulu nabantu futhi uzibona kalula izinkinga ezibhekene nabantu ngoba naye zimuthinta ngqo. Inhlosonqangi yewadi komiti ukugqugquzela imiphakathi ukuthi ibambe iqhaza kuhulumeni. Loko bakwenza ngokuthi zikhathi zonke balalele izidingo zabantu bese bedlulisela ekhanseleni ngezikhathi zemihlangano yonke. Futhi babuye bethulele imiphakathi loko ikhansela elikushoyo ngezinhlelo uhulumeni anazo. Uma lowo msebenzi wenziwa ngobuqotho nangeqiniso angeke sibe nenkinga yemibhikisho ngoba abantu bazobe beyazi kahle intuthuko abahlelelwe yona uhulumeni. Isikhathi esiningi imibhikisho iye iqhamuke ngento evele esohlelweni luka hulumeni kube ukuthi umphakathi bewungaziswanga ngayo.
Amalunga amawadi komiti amele iminxa ehlukahlukene emiphakathini okubalwa abakhubazekile, abantu abadala abantu abasha futhi kumele kukhethwe ngokulinganisa ngokobulili. Kumele ngikusho ukuthi sezikhona izindawo esekukhethiwe kuzona kwahamba kahle. Zikhona ezinye izindawo lapho kubekhona izingqinamba kodwa ihhovisi likaSomlomo libhekena ngqo nazo lezo zinselelo. Ayikho indawo engeke ibe nalamakomiti ngoba ukusebenza kwewadi kusho ukusebenza kwekomiti lewadi. Siyafisa ukuthi imiphakathi ibambisane nabobonke abasebenzi bakamasipala.
Kumele sikuqonde ukuthi amawadi komiti awanawo amandla edlula awomkhandlu kodwa abonisa futhi enze iziphakamiso kuMkhandlu ekuhlelweni intuthuko. Ukuba ingxenye yewadi komiti akusona isikhundla sokuzikhukhumeza kodwa isikhundla sokusebenza usebenzele umphakathi wangakini. Ukuqhakamba komphakathi kulele ekusebenzeni kwamawadi komiti. Kubalulekile ukuthi imiphakathi ibambe iqhaza kuhulumeni wawo. Ukubamba iqhaza akupheleli ekuvoteni kodwa ekutheni ubheke ukuthi uyasebenza yini uhulumeni omukhethile nanokuthi usebenza ngendlela yini.
Angibongele labo abakhethiwe ukuba amawadi komiti ngibongele nalabo abasazokhethwa. Kubona bonke ngithi “phezu komkhono.”